Siyaasiyiinta Puntland oo ku baaqay in aan doorasho la gelin ilaa la xaliyo khilaafyada (Dhegeyso) – Radio Daljir
Siyaasiyiinta Puntland oo ku baaqay in aan doorasho la gelin ilaa la xaliyo khilaafyada (Dhegeyso)
Nofeembar 14, 2013 3:17 b 0
Badhan, November 14, 2013 – Qaar ka mid ah siyaasiyiinta kala duwan ee Puntland ayaa walaac ka muujiyey in doorasho dhacdo iyadooa y jirto kala daadsanaan iyo qaar ka mid ah gobollada oo maqan, waxaana ay ku baaqeen in la helo wada-hadal si ay u dhacdo doorasho balaaran.
Gudoomiyihii hore ee gobolka Sanaag Maxamuud Siciid Nuur dabayl oo la hadlay idaacada daljir, waxaa uu ?sheegay in ay muhiim tahay in isimadu ay doorkooda ciyaaraan, isla markaasna la muujiyo isu soo noqosho lagana wada-hadalo caqabadaha jira.
?Waxaa maqan gobolka Sool iyo deegaano kale, waana Puntland ma mudna in doorasho loo ordo iyadoo la kala maqan yahay, gogosha Qardho ha laga qayb-galo si xal loo gaaro.? Ayuu yiri Maxamuud Siciid Dabayl oo u waramay Daljir.
Mudane Dabayl waxaa uu ku baaqay in marka dib loo eego dhismihii Puntland, kadib uu is bedel wayn dhacay, taas oo iyana u baahan in is bedel lagu muujiyo, waxaa uu ku celceliyey in isimadu isu yimaadaan.
?Caqabada ugu wayn ee taagan waxaan oran karaa waa xillibaanada 66-da ah, dastuurku ha socdo oo horumar ha la sameeyo, maaha in la joogo halkii asaaska.? Gudoomiyihii hore ee Sanaag ayaa sheegay in caqabado waa wayn oo muuqda ay weli jiraan.
Roobabka oo burburiyey in ka badan 80 beerood oo muhiim u ahaa suuqyada Garoowe (Dhegeyso)
Puntland oo sheegtay in dadka ugu badan ee masiibada wax ku noqday ay yihiin caruur iyo waayeel